WAXAA BURBURAYA XISBIGII DAMMUL JADIID. | Voice Of Somalia
WAXAA BURBURAYA XISBIGII DAMMUL JADIID.
Posted on September 14, 2016 by Voice Of Somalia Image
Khilaaf maalmahan la qarinayay ayaa ka dhex taagan Xisbiga dhexdiisa,waxaa sida muuqata isku soo haray Xasan Sheekh, Faarax iyo dad u badan dhalinyaro sida Odawaa iwm.
Waxaa horey Xisbiga uga baxay dad diiday qaabka loogu tagri falo dhaqaalaha soo gala maamulkooda fadhiistay Villa Somalia.
Dhaqaalahaas waxaa ka mid jaamacadaha Xamar intooda bada, Skoolaadkii sare ee Soomaalida oo ku jira gacanta xisbiga.
Waxaa siro badan oo qarsoonaa bixiyay Kamal Guutaale iyo Fahad Yasiin oo ay hada is hayaan Faarax Cabdulqaadir.
Xisbiga ayaa wajaha mucaaradad xoog oo ka imaanaysa rag la soo shaqeyn jiray, kana war haya halkay salka ku hayaan,kuwaas oo intoodii badnayd isku aruursaday waxa loogu yeeray “MUCAARIDKA ISBEDELDOONKA AH”
Cabdikariin Guuleed ayaa ka soo muuqday isaga oo booqday Shariif Sheekh Axmed oo ah musharax raba inow markale fuulo kursigi Kaaraha Amisom saarnaa ee Villa Somalia yaalay!.
Guuleed ayaa xanuunsaday waxaana lagu sameeyay qaliin wadnaha ah,sidaas daradeed waxay Damul Jadiid kula taliyeen inow xilka Galmudug ka dego iskana nasto,waana meesha labaad oo khilaafka xoogiisa keentay.
Shirar maalmahan ka socday Muqdisho ayaa lagu arag Guuleed iyo rag dhalinyaro ah oo xisbiga ka tirsan,waxaana la filayaa in maalmahan soo socda ay soo muuqdaan meel aan Xasan Sheekh iyo Faarax aysan jeclaysan.
Xasan Sheekh iyo xisbigiisa Dammuljadiid ayaa laga nacay Muqdisho,waxaana aad looga habaaray maalmihii Ciida oo ay jidadka u xireen waxay ugu yeereen Shir Igad leedyahay,kaaso shirqool markale loo dhigay Soomaalida.
VIDEO-Dalsoor:Badda Soomaaliya – The Somali Sea
Ciidamada Ethiopia Oo Ka Baxay Moqokori (Hiiraan) Bilaabayna Inay Iskaga Baxaan Gayiga Soomaaliyeed.